OTU ESI AGBANWE AHA OKU NA YOUTUBE - YOUTUBE - 2019
Agbanwe aha aha na YouTube
Maka ndị chọrọ ịme egwú, ọ na-esikwu ike karị ịme nhọrọ nke mmemme nke e mere maka nke a. Enwere otutu ọrụ ntanetị di na ahia, nke ọ bụla nwere ọtụtụ akụkụ nke ya, na-amata ya site na isi. Ma, enwere "ndị ọkacha mmasị". Otu n'ime ihe omume kachasị ewu ewu bụ Sonar, nke Cakewalk mepụtara. Ọ bụ banyere ya na a ga-atụle.
Hụkwa: Mmemme maka edetu egwu
Ị nwere ike ijikwa ngwaahịa Cakewalk site na onye na-ese ihe. N'ebe ahụ, a ga-amara gị ọkwa banyere ntọhapụ nke nsụgharị nke mmemme ma nwee ike ijikwa ha. Ị mepụtara akaụntụ nke aka gị ma nwee ike iji ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ.
Nke a bụ windo nke na-ebido anya site na mbido mbụ ahụ. A na-enye gị ka ị ghara ịmepụta ọrụ dị ọcha, ma iji ụdị ejiji dị njikere iji nyere aka rụọ ọrụ ahụ. Ị nwere ike ịhọrọ template kwesịrị ekwesị maka onwe gị ma kee. N'ọdịnihu, ị nwere ike idezie ihe ndị ahụ, ya mere, template bụ naanị ndabere, nke ga-enyere aka ịchekwa oge.
Onye nchịkọta nke Multitrack
Site na mmalite, nke a na-ewepu ọtụtụ ihuenyo (nha nwere ike dezie). Ị nwere ike ịmepụta egwu egwu na-akparaghị ókè, onye nke ọ bụla nwere ike dezie ya iche, na-etinye nzacha na ya, mmetụta, ịhazi nhazi. Ị nwere ike gbanwee ọsọ agba ọsọ, na-edekọ na egwu ahụ, gbanwee olu, uru, ogbi ma ọ bụ na -emeghachi egwu ọkpụkpụ, gbanwee nrụnye akpaaka. Enwere ike ichikota egwu ahụ, mgbe nke a gasịrị, a gaghị etinye ya n'ọrụ na nzacha ya.
Ngwa na piano
Sonar enweworị ụfọdụ ngwaọrụ ndị ị nwere ike hazie ma jiri. Iji mepee ma ọ bụ nyochaa ha, ịkwesịrị ịpị "Ụdị"nke ahụ dị na ihe nchọgharị na nri.
Enwere ike ibufe ngwá ọrụ ahụ na window windo ma ọ bụ họrọ ya mgbe ị na-eke egwu ọhụrụ. Na windo ngwaọrụ ahụ, ị ​​nwere ike pịa igodo ahụ ga-emeghe usoro sequencer. N'ebe ahụ ị nwere ike ịmepụta ma chekwaa usoro nke gị.
Ị na-ejedebere na ndokwa ederede dị njikere na Piano Roll, ị nwere ike ịmepụta ndị ọhụrụ. Enwekwara ọnọdụ zuru ezu nke nke ọ bụla n'ime ha.
Ọ dị nnọọ mfe na nke a dị na windo onye nyocha na n'aka ekpe. Ya mere, ha nwere ike iji n'otu ntabi anya site na ịpị otu igodo. Ịkwesighi ijikọ onye nhazi ọ bụla na egwu ọ bụla, họrọ otu chọrọ ma gaa n'ihu. Ị nwere ohere dịgasị iche iche maka edezi, nke na-enye gị ohere imezi otu egwu kpọmkwem na ụda achọrọ.
Mmetụta na nzacha
Site na itinye Sonar, ị nwetaworị ụdị mmetụta na nzacha ị nwere ike iji. Ndepụta a gụnyere: Reverb, Surround, Z3ta + mmetụta, equalizers, compressors, Distortion. I nwekwara ike ịchọta ha n'ime ihe nchọgharị ahụ site na ịpị "Audio FX" ma "MIDI FX".
Ụfọdụ n'ime FX nwere interface nke ha ebe ị nwere ike imezi ntọala.
E nwekwara ọtụtụ ọnụọgụ abụọ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịkwesighi iji ha akazie ihe niile, dị nnọọ họrọ template ị kwadebere.
Dezie BPM niile egwu, kwụsịtụ, nụ ụda, belata ụda ahụ, wepụ mmetụta - a ga-eme nke a na panọm arụmọrụ, ebe a na-anakọta ọtụtụ ngwaọrụ iji rụọ ọrụ na egwu niile, yana nke ọ bụla iche.
Na nwelite na nso nso a, e gosipụtara algorithms ọhụrụ nchọpụta. Ekele maka njirimara a, ị nwere ike imekọrịta ihe, gbanwee oge, dozie ma gbanwee.
Ijikọ ngwaọrụ MIDI
Site na keyboard na ngwaọrụ dị iche iche, ị nwere ike jikọọ ha na kọmputa ma jiri ya na DAW. N'ịbụ ndị a haziri ahazi, i nwere ike ijikwa ihe dị iche iche nke usoro ihe omume ahụ iji ngwa ndị ọzọ.
Nkwado maka plugins ndị ọzọ
N'ezie, ịbunye Sonar, ị nwetaworị ọrụ ọrụ, ma ha ka nwere ike ọ gaghị ezu. Ọdụ igwe dijitalụ a na-akwado ntinye nkwụnye na ntanye ọzọ. Na iji mee ihe ọ bụla iji rụọ ọrụ nke ọma, nanị ịkwesịrị ịkọwa ebe ị wụnye mgbakwunye ọhụrụ.
Ịnwere ike idekọ ụda site na igwe okwu ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ ejikọrọ na kọmputa. Iji mee nke a, naanị ị ga-achọpụta na ihe ndekọ ahụ ga-aga ya. Họrọ ngwaọrụ ịbanye, pịa egwu "Na-akwadebe maka ndekọ" ma mee ka ihe ndekọ ahụ dị na panel nchịkwa.
Mbupu nke dị mfe ma doo anya;
Nnweta free movement nke windo windo;
Nweta nkwalite na nsụgharị ọhụrụ;
Enweta nsụgharị ngosi ngosi a na-akparaghị ókè;
Ntughari otutu oge.
Ekekọrịta site na ndenye aha, na kwa ọnwa ($ 50) ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ kwa afọ ($ 500);
Mkpọpụta nke ihe dị iche iche na-eweda ndị ọrụ ọhụrụ ala.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere uru karịa ụkọ. Sonar Platinum - DAW, nke bara uru ma ndị ọkachamara ma ndị amateurs na mpaghara nke ihe egwu egwu. Enwere ike ịrụ ya ma na ụlọ studio na n'ụlọ. Ma nhọrọ bụ mgbe gị. Download ikpe ikpe, nwalee ya ma eleghị anya, ọdụ a ga-ejide gị na ihe.
Download Sonar Platinum Trial Version
CrazyTalk Animator Esi edozi njehie na window.dll na-efu Sketchup MODO
SONAR abụghị naanị ọrụ ntanetị dijitalụ, ọ bụ ihe mmepụta egwú egwu dị elu, nke nwere ike ịnweta maka mmalite na ndị ọkachamara.
Onye Mmepụta: Cakewalk
Ọnụ: $ 500
Version: 2017.09 (23.9.0.31)